Iprofayile ye-1974 Ford Mustang II
Iimoto neekhekhi Mustangs
by UJonathan Lamas
I-Coupe Standard: ii-177,671 iiyunithi
IGhia Coupe: iiyunithi ezingama-89,477
I-Standard Hatchback: 74,799
I-Mach I-Hatchback: 44,046
Imveliso Yonke : iiyunithi ezingama-385,993
Ixabiso lokuThengisa: $ 3,134 I-Coupe Standard
Ixabiso lokuThengisa: $ 3,480 iGhia Coupe
Intengo yokuThengisa: $ 3,328 i-Standard Hatchback
Ixabiso lokuThengisa: $ 3,674 i-Mach I Hatchback
Unyaka ka-1974 wabonisa ukusa kwexesha elitsha kwiF Ford Mustang. I-OPEC i-embargo yeoli, kunye noqoqosho oluqinisekileyo, lushintshe indlela abathengi abajonga ngayo ukuqhuba.
Ngaloo ndlela, iF Ford yaphoqeleka ukuba ibuyele kwibhodi yokudweba. Injongo yalo: ukwakha i-Mustang entsha eya kuba yomeleleko yombane kwaye iyakwazi ukupasa imigangatho emitsha yokukhishwa kwamanzi.
U-Lee Iacocca, uMongameli we-Ford Motor Company, waxhoma kwiprojekthi, waqulunqa "i-Mustang II". Xa ebuzwa malunga nemingeni awayejamelana nayo ekudaleni i-Mustang entsha, wathi, "Yonke into ka-1974 iya kufuneka ibe yinto enye; Kuya kufuneka ibe yincwadana encinane. "Kakade, i-Iacocca yayingaziwayo kwiF Ford Mustang. Yena, kunye neqela labaqulunqi kunye neenjineli, badale iF Ford Mustang yokuqala kwiminyaka yama-1960. Injongo yakhe yokuqala yayikudala imoto eya kukhuthaza ukuthengisa. Ukuthengiswa kwe-Mustang bekuye kwahla kwexesha elithile. Kwakhona wayefuna ukudala isithuthi esingahambelana nemigangatho emitsha yomgaqo-nkqubo, njengaleyo eyayigunyaze ukuba i-bumpers ikwazi ukujamelana nokuxabana kwe-5 mph ngaphandle kokulimala kwisithuthi.
I-Mustang II Design
Ukususela kwindlela yoyilo, i-Mustang II ye-1974 yayisekelwe kwisikhundla seF Ford Pinto. Enyanisweni, kwakuthiwa yi "Pintostang" ngexesha lophuhliso lwayo. Kuzo zonke, imoto ibonakalisa iimpawu ze-Yurophu yokuyila ngokuzenzekelayo. Kwakuyinto ehambelanayo, ecocekileyo, kunye nokukhawulela ixesha.
Ngokomzekelo, xa kuthelekiswa nomzekelo we-1973, i-Mustang II yayingama-intshi ama-19 amancinci kwaye i-490 ipounds. Ngokubhekiselele kwitheknoloji yokukhawulela, yabonisa iitrailli ezinkulu ezinkulu zokukhuseleka, amathayitha aqingqiweyo ensimbi, kunye ne-rack-and-pinion.
I-Ford Ford yokuqala ifake injini ye-4-cylinder
I-Ford Ford yokuqala ifake i-V-6 injini
Igumbi leGesi lihanjiswe ukusuka kwinqanaba lemoto ukuya kwipaneli yekota
Izitsha ezithintekayo zangoMnyango ziyi-standard
Utshintsho olukhulu ngo-1974 yilokho iFoeeld ebeka phantsi kwe-hood. Kuphela iinjini ze-Mustang zanikwa. Zayinjini ye-2.3L ye-4-cylinder (88hp) kunye ne-2.8L V-6 injini (105 hp). I-injini ye-V-8 yinto edlulileyo. Ngaloo ndlela, i-Mustang II ye-1974 yayinamandla kakhulu xa ifaniswa neminyaka emiselweyo yangaphambili. Enyanisweni, isantya esiphezulu saso sasingama-99 mph kuphela ngo-0-60 mph kwixesha le-13.8 imizuzwana. Ingqalelo, i- Mustang II iphambili yepony ibonakaliso yaguqulwa ukufanekisela ngaphezulu kwe-trot kune-gallop. Oku kunengqiqo, ngokunikezwa kwamandla phantsi kwe-hood. Oko akuthethi ukuba umgca awuzange uphawule. Enyanisweni, i-injini ye-2.3L ye-4-cylinder yayinesixhobo sokuqala seenjini zaseMelika eziza kwenziwa. Kwakhona iyinjini yokuqala ye-4-cyilinder eya kubonakala kwi-Mustang.
Umzekelo wonyaka we-1974 wawubonakalisa injini yokuqala ye-V-6 e-Mustang, ukubeka umgca we-6 owedlule kwiminyaka edlulileyo.
Kukho konke, i-Mustang II ifike kunye neminikelo yokudluliselwa emibini; incwadi yesantya esine-speed or three-speed. Imoto yayifumaneka njengento yokunqumla okanye i-hatchback. Kuloo mizobo, emine imizekelo yayifumaneka, equlethwe ngumgca oqhelekileyo, iGhia cube, i-hatchback ejwayelekile, kunye neMac I-hatchback. I-Ghia cube, ebizwa ngokuba yi-studio yaseItaly, yayingumongo we-Mustang II. I-Mach 1 yayiyimodeli yokusebenza. Yayinjini ye-2.8L ye-V-6 emgangathweni kunye noMak I amanqaku omda, iipilisi zomsila zombini, kunye nomsebenzi wepeyinti we-Tu-Tone kunye nopende olumnyama kumzimba osezantsi kunye nepaneli yomzila.
Ezinye iinkalo ze-Mustang II zaziquka iphambili enye ebhekise phambili kwi-fascia kunye ne-bumper ngaphambili.
Kwakhona kubandakanya i-scallops yecala efana neyo yabonwa kwi-Mustangs yama-1960. Izitsha zokungena ezitsha zinyango ziyimilinganiselo kwi-Mustang II. Enye impawu yeemoto yayiphendule imiqondiso kwi-grille. Kwilihlo elingakhange lifundiswe, babonakala bebanezibane zombhobho. Kwakhona kwesaziso, iFransi yahambisa isitya segesi ukusuka kwinqanaba lezithuthi ukuya kwiphaneli yekota kwikota ye-1974.
Kwabo bathengi abafuna i-flair, uphahla lwama-vinyl luye lwafumaneka njengendlela eyongeziweyo. Iiglasi ezicatshulwa kufuphi nomphezulu we-windshield yayifumaneka ngeendleko ezongeziweyo, njengoko kwakuyivili ezikhethekileyo ze-aluminium kwiMak I.
I mpendulo yoLuntu
I-1974 i-Mustang II yayingenayo ihashe yamandla, kodwa yayingenangqiqo kwaye ine-gas efanelekileyo. Ngaloo ndlela, abathengi baloo mini bathanda imoto. Ngaphantsi kwee-3,000 zamaRandi, babezithengela i-model model. Phonsa kuzo zonke iintsimbi kunye nemishulo, kwaye i-Mustang II yahamba enye engaphezulu kwama-4,000. Nangona kunqongophala kwamandla phantsi kwe-hood, i-Mustang II yayiyimpumelelo enkulu. Enyanisweni, iFort yathengisa i-385,993 yeemoto ngo-1974.
Lezo zininzi iinombolo, becinga ukuba inkampani ithengise ii-Mustangs ezingama-134,867 ngowe-1973. Imoto yayithandwa. Kuninzi, enyanisweni, ukuba yavotelwa i- Motor Trend Magazine ka-"Car of the Year" ngo-1974. Xoxa ngembeko ehloniphekileyo. Ngokomaphephancwadi, imoto yanikezelwa ngesihloko ngenxa yoqoqosho lwayo oluphezulu kunye nexabiso jikelele. Njengoko unokucinga, uLee Iacocca waphinde wavuya ukuba igama lakhe linxulumene nesithuthi esiphumelayo.
Xa ndijonga emva, abantu abaninzi namhlanje balingisa ngo-1974 i-Mustang njengomdlali ophantsi. Kubalulekile ukukhumbula, i-Mustang II yadalwa ngenjongo ethile. Njengoko inani lokuthengisa libonakalisiwe, imoto yayiyimpumelelo ngomhla wayo. Kwiqonga elikhulu lezinto, liya kubonisa indlela iP Ford Mustang ehambelana ngayo neyona minyaka. Ngokungafani neemoto ezininzi kwiimarike, i-Mustang iye yakwazi ukufudumala isiphepho ngokuzivumelanisa neemfuno zosuku.
Injini Yomgaqo Y: 140 intshi ye-cubic 2.3L 2V 4-cyilinder injini @ 88hp
I-Injini ye-Z: I-inch cubic inch 2.8L 2V V-6 injini @ 105hp
I-Identifier Number Identifier
Umzekelo I-VIN # 4F05Z100001
4 = Idijithi yokugqibela yoMzekelo woMnyaka (1974)
F = Ukutyala kwintlanganiso (F-Dearborn, R-San Jose)
05 = I-Code Code Mach I (i-02-cut, 03-matchback, 04-Ghia)
Z = Ikhowudi yeeNjini
100001 = Inombolo yunithi yokulandelelana
Imibala engaphandle: I- Green Green Gold Metallic, Ubomvu obomvu, Ubomvu obomvu, Ukukhanya kwe-Ginger, Ukukhanya okuKhanya, ukuKhanya okuKhanya, Ukukhanya okuphakathi, Ubomvu obomvu, Ubomvu obuninzi phakathi, I-Medium Lime ephuzi, Igolide eliphakathi kweNtsundu, i-Pearl White, i-Saddle Bronze Isinyithi, i-Silver Metallic , I-Tan Glow
Ungayichazela njani u-1965 Mustang ukususela ngo-1966?
Iingoma ezili-10 NgeFranny Mustang
I-Ford Mustang kwiimifanekiso
Iincwadi ezili-10 kwi-Design School
U-Alfred Hitchcock noCary Grant Classic Movies
I-SAT izikolo zokufakwa kwiiKholeji zaseMzantsi Carolina
Ukuloba i-Drop Shot kwi-Saltwater
I-Akhawunti Yomntu Wokuqala Yokufumanisa KweGolide eKalifoniya ngo-1848
Ngaba Unako Ukuphilisa Intliziyo Eyingozi Ngeengcaphuno Zothando?
Yintoni iCarbon Sequestration?
Uphando lweNtsha lonyaka, i-Crossword Puzzles, kunye neNinzi